Xoogaagga Tigray-ga oo ka hadlay tallaabada uu Abiy qaaday iyo dagaalka cusub | Dalkaan.com
Home Warkii Xoogaagga Tigray-ga oo ka hadlay tallaabada uu Abiy qaaday iyo dagaalka cusub
Xoogaagga Tigray-ga oo ka hadlay tallaabada uu Abiy qaaday iyo dagaalka cusub
Mekele (dalkaan) – Ciidamada dowladda federaalka Ethiopia iyo xulufadooda ayaa billaabay weerar cir iyo dhul ah oo ay ku qaadayaan gobolka Amhara, oo qeybo ka mid ah ay haystaan ciidamada Tigray-ga.
Afhayeen u hadlay Jabhadda Tigray-ga ee TPLF ayaa maanta xaqiijiyey inuu jiro dhaq-dhaqaaq xooggan oo ka dhan ciidamadooda.
Afhayeenka TPLF Getachew Reda ayaa sheegay in weerarada ay illaa hadda yihiin “duqeymo cirka oo ay fulinayaan drone iyo madaafiicda artillariga.”
Getachew ayaa sidoo kale sheegay in “kumanaan askari lasoo dhoobay” waqooyiga gobolka Amhara, oo ay ku jiraan aagga Gondar iyo Waqooyiga Wollo.
“Waxaan ku kalsoonnahay inaan iska caabin doonno weerarka iyo jiho kasta oo nalaga soo weeraro. Waxaan ku taagnaan cago adag illaaa qabsashada nalaga qaado,” ayuu yiri.
Weerarada ayaa ka dhacay dhowr goobood oo ku yaalla gobolka Amhara Khamiistii iyo Jimcihii, sida ay sheegeen ilo-wareedyo la hadlay wakaaladda wararka AFP, ayada oo ay sii kordhayaan wararka ku saabsan in dowladda ay qaadeyso dagaal culus oo ka dhan ah Tigray-ga.
Previous articleMid ka mid ah qoraayaashii ugu wanaagsanaa bulshada Soomaalida oo geeriyooday
Next articleSomaliland oo shaacisay cidda ay u aqoonsan tahay inay yihiin muwaadiniinteeda
CC Sharmaarke oo jawaab cajiib ah ka bixiyey tallaabada ay qaaday...
Hordhaca: Kulamada Serie A Italy, Torino Vs Juventus, iyo Sassuolo Vs...
Uhuru Kenyatta oo war cusub kasoo saaray go’aankii ay gaartay Maxkamadda...